FCP X: Mepụta na Ken Burns Mmetụta
FCP X: Mepụta na "Ken Burns Mmetụta"
The "Ken Burns mmetụta" e mere na-ewu ewu site akwụkwọ filmmaker Ken Burns onye mere stills ndụ iji pans na zooms. Final Cut Pro X mere nke a mmetụta na wuru ya n'ime software. (Ná ngwụsị nke isiokwu a, ị ga-ahụ ihe update ekpuchi a ọhụrụ mma Apple kwukwara na 10.1 ntọhapụ.)
E nwere n'ezie ụzọ abụọ na ike a na mmetụta:
1: Iji na akpaghị aka "Ken Burns mmetụta" ngwaọrụ
2: Iji keyframes
The uru iji akpaghị aka ngwá ọrụ na ha bụ ndị ngwa ngwa na mfe. Otú ọ dị, mgbe a na-eji dum oge nke clip. The uru iji keyframes bụ na ị pụrụ izubandu a zuru ezu clip, ma ọ bụ nanị otu akụkụ nke clip. Otú ọ dị, keyframes bụ dịtụ ike iji.
Isiokwu a na-egosi ma usoro.
Mepụta ngagharị na-eji "Ken Burns" Mmetụta
Itinye Ken Burns mmetụta a ka oyiyi ma ọ bụ video clip, họrọ clip na usoro iheomume. (Nke a bụ foto m wee nke Malahide Castle dị nnọọ ná mpụga Dublin, Ireland, mgbe m letara na nso nso on a-edebe semina maka tour.)
Pịa akuku na akara ngosi na ala n'akụkụ aka ekpe nke onyenlereanya ....
Mgbe ahụ, pịa Ken Burns utịp ke mmanya n'ụlọ n'elu.
Abụọ rectangles-egosipụta. The green rektangulu-egosi ihe oyiyi egosipụta na mmalite nke clip. The red rektangulu-egosi ihe oyiyi egosipụta na njedebe nke clip.
IHE: The Ken Burns mmetụta mgbe niile na-agba ọsọ dum oge nke a clip. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ọ na naanị-agba ọsọ n'ihi a òkè nke clip, bee clip na aguba agụba.
Pịa n'ime green rektangulu, ma ọ bụghị red rektangulu, nke-ahọrọ ndị green rektangulu - nke a na-esetịpụ amalite ọnọdụ. Ịdọrọ nkuku nke green rektangulu ka size-amalite oyiyi. Na nke a, m na-ahọpụta a obosara gbara na ala nri òkè nke etiti.
Mgbe ahụ, pịa n'ime red rektangulu ka họrọ ya na size na ịdọrọ ya ruo mgbe ị ga-esi agwụcha image ị chọrọ. Na nke a, m na-zooming n'ime top window nke turret, ka a mata ebe ngosi Princess a na-e n'agha site ... nke ọma, m maa ị maara na akụkọ.
Na-acha ọcha akụ na-egosi ntụziaka nke ije.
IHE: Zere zooming ihe oyiyi oke buru ibu na eku. Ebe ọ bụ na video mgbe niile-emekọ bitmapped oyiyi, zooming kwa anya nanị emepụta abụba pikselụ - nke anya jọrọ njọ. Ebe a bụ isiokwu na sizing ka oyiyi maka video.
Press elu akụ isi ịkwaga mmalite nke clip na pịa Play.
The clip were were zooms si Malite na ogwugwu ọnọdụ. (N'eziokwu, n'ihi na smoothest Nkea, ị kwesịrị ichere maka clip ijere. Otú ọ dị, ọbụna tupu nsụgharị zuru ezu, ị nwere ike nweta ezi echiche nke ihe aga ga-ele anya dị ka site na ịpị Play.)
Ọ bụ ya. Ngwa ngwa na mfe. Na mere.
E nwere ihe ọhụrụ nhọrọ na Apple kwukwara na 10.1 melite iji Final Cut Pro X: anyị ugbu a nwere ikike ịgbanwe osooso na deceleration ná mmalite na ọgwụgwụ nke Ken Burns mmetụta.
Ndabara ọnọdụ eji na-na mmetụta ga-amalite na-akwụsị nwayọọ nwayọọ, ma adị n'elu n'etiti. Ugbu a, mgbe anyị na-nri-click (Control-click) n'ime onye nkiri na họrọ clip, anọ nhọrọ egosi:
Mfe na ya: accelerates ná mmalite na decelerates na njedebe nke mmetụta.
Iru ala na: decelerates na njedebe nke mmetụta.
Mfe mkpu, sị: accelerates na mmalite nke mmetụta.
Linear: ekwusi otu ọsọ ofụri mmetụta.
Mepụta ngagharị iji keyframes
Nanị nsogbu na a na-bụ nke na-na-eji dum oge nke clip, ọ bụrụ na ị chọrọ ka ọ na-agbanwe ọsọ ma ọ bụ kwusi n'etiti a aga, i nwere ike. N'ihi na larịị nke complexity, i kwesịrị iji keyframes.
Definition: A keyframe emepụta a mgbanwe n'oge playback. Ọ bụla oke na FCP X nwere ike keyframed. Na gị mgbe niile na-eji keyframes na ụzọ abụọ - a amalite na-agwụcha keyframe.
Mgbe aka sizing na n'ọnọdu oyiyi, họrọ clip, gaa na soja (Wụk + 4), na set gbasara ohere ime ihe kwekọrọ Ọ dịghị onye. Nke a na-egosiputa image na ya zuru mkpebi, na-enweghị egbuke gburugburu. (A bụ otu isiokwu na-akọwa gbasara ohere Ịgbapụ.)
Egosiputa gị playhead na clip ebe ị chọrọ nkwaghari na-amalite na-eme ka n'aka na clip ka na họrọ. Mgbe ahụ, kpatụ ịgbanwe ntọala na soja ruo mgbe ị nwere na-amalite ọnọdụ maka oyiyi. (A ka ihe atụ, m chọrọ nkwaghari na-amalite otu abụọ na, scaled mbiet 65%, ma kwaga oyiyi elu 39 pikselụ.)
N'ihi na anyị kwesịrị ịgbanwe ọnụ ọgụgụ na ọnọdụ n'oge a aga, anyị ga-chọrọ ka a na-amalite na-agwụcha keyframe. Keyframes na-setịpụrụ maka onye ọ bụla oke na ị chọrọ ịgbanwe - na anyị ikpe, na pụtara n'ọtụtụ (size) na Position.
Pịa isi awọ diamond na a gbakwunyere ịrịba ama ka a isi etiti maka ma Position na ọnụ ọgụgụ (abụọ keyframes ngụkọta).
Ọzọ, megharia playhead ebe ị chọrọ nkwaghari kwụsị. Gbanwee ma ọnụ ọgụgụ na Position ruo mgbe ị ga-esi ikpeazụ ọnọdụ set. N'ihi na ị na-ama kere keyframes n'ihi na ndị a ntọala, Final Cut na-akpaghị aka na-ede agwụcha keyframes.
Ndị ọzọ okwu, ị na mkpa kee amalite keyframes. Mgbe ahụ, FCP emepụta ndị ọzọ nile keyframes maka ndị parameters-akpaghị aka.
Play gị clip ma na-ekiri ka aga amalite na n'etiti clip na-agwụ tupu ọgwụgwụ.
Ugbu a, ihe na-akpali.
Pịa ịgbanwe na akara ngosi na ala n'akụkụ aka ekpe nke onyenlereanya nke na-egosiputa a red Motion Path, na-egosi ije nke gị ihe oyiyi.
Jidere na-acha ọcha mgbanaka (nke na-anọchite anya center nke gị ihe oyiyi) na ịdọrọ ya. Rịba ama na ndị ngagharị ụzọ atụgharịa n'ime a usoro!
Pịa ọhụrụ ọnọdụ keyframe ị dị nnọọ kere na abụọ Beziér akụkụ-egosipụta.
Jidere otu n'ime ndị ịṅụ na ịdọrọ ya ịgbanwe n'akuku nke usoro. Mee ahụ aba iji dozie usoro, ka aka mkpumkpu ka nkọ usoro.
Right-pịa ọ bụla keyframe Ka ịgbanwee n'etiti linear (ogologo-akara)-eji ire ụtọ (akụkụ). I nwekwara ike iji nke a mmapụta menu ka ihichapụ, mkpọchi, ma ọ bụ gbanyụọ keyframes.
The Ken Burns mmetụta bụ ngwa ngwa, na-eme ka oyiyi itinye n'ọnọdụ dị mfe. Otú ọ dị, i nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ mgbanwe na akara site na iji keyframes.
Site ndabara, Ken Burns mmetụta ji nwayọọ nwayọọ na accelerates na mbu, gbapụrụ ọsọ elu n'etiti na slows ala na njedebe.
Otú ọ dị, i nwere ike ịgbanwe na ndabere ọnọdụ site na nri-ịpị (Control-ịpị) na clip image n'ime onye nkiri:
Mfe-na / mfe Ọ bụ ndabere omume
Ala-in slows ala na njedebe nke mmetụta
Mfe-esi gbapụrụ ọsọ elu na mmalite nke mmetụta
Linear pụtara ọsọ nke mmetụta na-anọgide mgbe nile ofụri clip
Ugbu a, ị nwere nhọrọ.
Import WMV ka Final Cut Pro na Best Ogo
> Resource> FCP> FCP X: Mepụta na Ken Burns Mmetụta